Jimce, Maarso 30, 2018 Khamiista, Noofembar 5, 2020 Arvind Parthiban
Xilligan casriga ah, dagaalka loogu jiro booska suuqgeynta ayaa u wareegay khadka tooska ah. Iyada oo dad badan oo khadka tooska ah ku jira, diiwaangelinta iyo iibkuba ay ka guureen meelihii ay ka soo guureen oo ay u wareegeen kuwii cusbaa, ee dhijitaalka ahaa Websaydhyadu waa inay ku jiraan ciyaartooda ugu fiican oo ay tixgeliyaan naqshadaha goobta iyo khibrada isticmaale. Sidaa darteed, degellada internetku waxay muhiim u noqdeen dakhliyada shirkadda soo gala. Marka la fiiriyo dhacdadan, way fududahay in la arko sida ugu fiicnaanta heerka beddelashada, ama CRO sida loo yaqaan, ay noqotay
Khamiis, Agoosto 21, 2014 Thursday, April 7, 2016 Douglas Karr
Kaliya waxaan wax ka qoray jacaylkeyga jaceyl ee aan la wadaagay Twitter-ka waxaanan la wadaagay dhowr aaladood oo waaweyn oo lagu maareeyo taageerayaashaada Twitter. Waa tan qalab kale oo fiican oo aan hadda ogaaday! Riffle by CrowdRiff waa aaladda loo yaqaan 'Chrome Plugin' oo ku dareysa muraayad shaashad Twitter ah oo kaa caawinaysa inaad aqoonsato oo aad falanqeyso macluumaadka isticmaalaha Twitter-ka. Riffle wuxuu bixiyaa macluumaad ay ka mid yihiin waxqabadka, ka-qaybgalka koontada, isha laga helayo tweets-ka iyo sidoo kale sheegashooyinkooda sare iyo xiriirkooda.